Iyo 'squid Mutambo' Prank Kumanikidza Netflix Kugadzirisa Zvimwe - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Iyo 'squid Mutambo' Prank Kumanikidza Netflix Kugadzirisa Zvimwe
Iyo 'squid Mutambo' Prank Kumanikidza Netflix Kugadzirisa Zvimwe
by Anthony Pernicka October 7, 2021 37,598 maonero
Squid Mutambo chiitiko chevaraidzo chiri kutora nzvimbo. Iyo yeNetflix yakateedzana Thriller yakarova iyo # 1 nzvimbo papuratifomu yekushambadzira munyika dzinopfuura makumi mapfumbamwe pasirese. Hazvina kunyanya kukanganisika zvakateedzana zvisina kana munhu aida kugadzira pakutanga. Netflix yakatodomwa ichiti squid Game inogona kunge iri "show yayo hombe kwazvo."
Fans Edza Kufona squid Mutambo
Zvakanaka, zvinoitika kuti iyo nhamba yefoni inoshandiswa mune yakateerana ndeye chaiyo inoshanda nhamba. Iwe hausi kuzosvika kune vanogamuchira mutambo. Iyo nhamba yefoni ndeyemukadzi weSouth Korea uyo akafukidzwa nezviuru zvekufona uye zvinyorwa kubva zvakateedzana.
Kim Gil-mudiki anotengesa shopu yekudyira mudhorobha reSeongju uye anga achishandisa iyo makore gumi nematanhatu, akaudza CNN China.
Pakakurumbira kuburitswa mutambo wekunyepedzera wekuSouth Korea "Squid Game", Kim akati aigamuchira zviuru zvefoni pazuva. Mumazuva mashoma apfuura, anga achiwana mazana efoni uye zvinyorwa, akadaro. - CNN.com
CNN iri kuzivisa zvakare kuti mukadzi uyu ave pamushonga kudzikamisa kushushikana kwake mushure mekushushikana kwese kwaitwa nefoni idzi. "Ini handigone kutarisa nekuti nhamba dzisingazivikanwe dziri kuramba dzichindifonera," akaudza CNN. Kufungidzira kwakachena pachangu, asi ini handizoshamiswa kana izvi zvichitungamira mukugadziriswa kweimwe mhando. Kunyanya nekuti Kim-Gil-mudiki ari kuti anoshandisa iyi nhamba kuchitoro chake che dessert uye bhizinesi riri kukanganiswa.
Netflix yakabvisa zviitiko kubva munhevedzano inoratidza iyo nhamba yefoni. "Pamwe chete nekambani yekugadzira, tiri kushanda kugadzirisa nyaya iyi, kusanganisira kugadzirisa zviitiko nenhamba dzenhare pazvinenge zvakakodzera," yakadaro kambani muchirevo kuna CNN China.